Umlingisi Daniil Belyh - iqhawe kwalesi sihloko. ababukeli abaningi wamthanda ngoba ngeqhaza lakhe "matchmakers" chungechunge, lapho kudlalwa Maxim. Nokho, uhlu imidwebo lapho waba nengxenye, ubanzi kangangokuba kufanele wayegxila. Sazise nini futhi kuphi umlingisi wazalwa, okuyinto eyaba negalelo elikhulu ngaye futhi yini ye-TV ne Daniilom Belyhom, abantu abaningi sibuyekeza izikhathi eziningana.
I hero lesi sihloko wazalwa ngo-December 4, 1979 emzini Irkutsk. Njengoba Uyakhumbula ebuntwaneni bakhe badlula engavamile kakhulu futhi original. Iqiniso lokuthi uyise, Georgiy Belyh, uye wayehlala futhi esebenza njengoba udokotela e-Irkutsk, umama, Natalia Kolyakanova (actress), wahlala e Moscow, futhi ugogo wakhe, lapho umfana ngokuvamile kwakudingeka ukuba liphile ubekade Orenburg. Daniil Belyh salandelwa izikole ezinhlanu zokutadisha kwabafundi ngoba sonke isikhathi, futhi njengoba ebangeni lesithupha ubezama uhola. Lo mfana kuphela engakathenjiswa umshado ku: imishini yokuwasha, ukuthengisa amaphephandaba abathintekayo black marketeering. Ngokuvamile, wayengakalitholi ngiphuphe nomdlali umsebenzi.
Njalo ichashazi has billet yayo
Futhi kwakukhona isifiso sokuba zibe kumdlali uma Daniil Belyh waqeqeshwa esikoleni lemfundo yobuhle. Okokuqala waba umfundi VGIK, kodwa ucwaningo luye akakavakasheli esisodwa. Ngemva konyaka, wangena abadumile Theatre School. Shchukin, okuvela kulo wathola iziqu ngempumelelo ngo-1995.
isiqalo Bright amabhayisikobho
Daniil Belyh, umnikelo Filmography usengumfundi, waba ngempela ethandwa ngo-2001, lapho izikrini lezi zithombe nge iqhaza lakhe ngokuthi "Odokotela", bese uthi "Day Onxiwankulu-2 Usuku lokuzalwa", bese uthi "FM kanti guys." Lena ngempela engokwemvelo. Nokho, njengoba le izilaleli ayithandi umlingisi onekhono futhi ebukekayo, ogama namaqhawe usemncane, enhle futhi ungalokothi zidikibele? Ngokwesibonelo, e "Medica" Daniyeli kudlalwa udokotela osemncane u-Andrew, wayesanda kuphothula esikoleni sezokwelapha futhi njalo bangene kwezinye izimo ezihlekisayo. Esikhathini uchungechunge «FM nezingane" wayevuka izindima Vadim bejabule futhi benethemba lokuhle, owayehlala umphefumulo inkampani. Futhi ifilimu ethi "Usuku lokuzalwa Onxiwankulu 'Daniil Belyh kudlalwa umphenyi eziphikelelayo Basil.
Impumelelo kufanele zixhunywe
Ngemva imidwebo oshiwo ngenhla umlingisi was yithela izipesheli abakhiqizi abaningi. Daniil Belyh, Filmography owakhula ngesivinini yashesha, ukuhlanganisa impumelelo yayo, Starring nezinhlelo ezifana "Lily of the Valley Silver-2" (2004) kanye "Knights yoLwandle Star" (2004-m). Kwabe sekudingeka ukuba uDaniyeli ukudlala ochungechungeni "Ngokuba bonke ngiyabonga" (2005-2006), kodwa ngendlela kunalokho ezingalindelekile yena. isimilo saKhe - wezidakamizwa i-Alex oludakayo eyabulala umalume wakhe siqu. Kuthiwa indima waya uyazikhulumela. Mhlawumbe kwakungenxa yokuthi uDaniyeli uthanda ukwenza izinguquko emazwini zokubhukuda. Kulokhu, nomdlali mkhuba waya kuphela ukuze kuzuze ochungechungeni.
indima Landelayo ongokomfanekiso
Uchungechunge lwezihloko ezithi "Nine Izimpilo Nestor Makhno" (2006) wanika umlingisi oludlala khona enkulu indima Thriller bese uhlanganisa Makhno - Fedosiya Schusya. Ngaphambi ukuqopha Daniil Belyh akuthola kudingekile ukuhlala ugcwalise ezinye izikhala ulwazi ebesifuna Esizwa uthisha wakhe wezomlando. Futhi ukuze ufunde ihhashi ogibele futhi ukulungele ngokugcwele, waya Golitsyno eduze eMoscow, iphi ibutho nalawo agibela amahhashi. Lesi sigameko senzeke e-Ukraine, okungukuthi kulezo zindawo lapho avakashela Makhno. UDaniel wazihlanganisa ndawonye iqhawe lakhe. Futhi zonke ngoba ngesikhathi ukuqopha leqembu wafika bendawo, kubahlanganyeli isixuku izigcawu lapho ngitshelwa ukuthi izihlobo zabo zase mathupha Makhno futhi wamchaza ngozwela nokufudumala. Daniel bathandile imodi wokusebenza, akudingeki izingubo ngemuva kokudubula, ukugibela amabhayisikili ekhaya ekuseni, ekuseni livuke futhi fly to the site. Ayehlala lapho + kulezo amasudi, lapho bobabili inkanyezi. Nakuba uchungechunge wadedelwa ehlobo ke ungathandi ukwenza amafilimu, waba zithandwa kakhulu futhi kwaba yimpumelelo enkulu.
Awama-Soap hhayi kuphela
UDaniel waba ukudlala abalingiswa ezahlukene kakhulu, kodwa njalo zaziletha okuthile eyabo, futhi ngezinye izikhathi kuziwa ngisho ukuxabana abakhiqizi. Kwathi iqoqo "Legacy" ezikuyi-2008, lapho uDaniel azame ngendima amathambo bokusungula. By the way, iqhawe lethu kunzima ngisho ukuthola, njengoba ekhanyisa izinwele futhi kakhulu owenziwe-up.
Ngo-2009 kwafika uchungechunge "umlobeli ekhethekile umnyango uphenyo", lapho uDaniyeli eseke indima enkulu. Wayedlala intatheli Dmitry Poluyanova.
Kuwufanele ukugqamisa iqhaza umlingisi zenza imisebenzi enjengokwakha "Abaqamekeli Christmas" (2008), "Ukuphila wayengekho lapho" (2008), "Inkosi" (2009), "Basic Inguqulo" (2010), "Lapho izimbali Lilac" ( 2010), "Uthando-isanqante 3" (2011), "udrako syndrome" (2011), "isidleke Swallow sika" (2011) kanye nabanye abaningi.
Lolu chungechunge othanda kakhulu abantu abadala kuphela kodwa futhi izingane. Daniil Belyh, ogama biography ugcwele ezihlukahlukene izindima, lokhu futhi wayengasoze asikhohlwa. Ngakho wathi kuye ngokwakhe njengeNdodana ejwayele ngokugcwele indima Maksima Kovaleva kulabo 5 zonyaka yochungechunge, lapho iqhaza. iqhawe lethu uthi indawo uye njalo wanqoba isimo bejabule futhi enobungane. Wacasuka kakhulu lapho siqeda sokudubula, ngoba lonke iqembu isibe eminyakeni umkhaya omkhulu, futhi ushiye akekho owayefuna.
izindaba yokubonisana uthando
Uma wenza amafilimu ochungechungeni TV «FM nezingane", hero yethu baqala ukuhlangana ne casula Slyu, actress, naye wahlanganyela ukuqopha. Ngo-2004, lo mbhangqwana ibhaliswe ngokomthetho nobuhlobo babo. Ngemva kwesikhashana, umlingisi ngasivuma umkakhe ukuthi wathandana naye lapho uqala nje ukubona, ngisho etshela abazali bakhe ukuthi wayethole umkakhe. Futhi ezithakazelisa kakhulu - akwenzile ngaphambi, baqala ukuhlangana no-Anna! Uhlobo kanye Anna noDaniyeli ngempela kuqhume, okwakuyigama imbangela izingxabano eziningi nokungezwani. Laba bobabili bese ukuhlakaza ke bukhomba futhi. Ngo-2008, kusafanele wayeqonda ukuthi akukho okuhle kuyofika kwalesi sibopho ngeke isebenze, base behlukana. Isehlukaniso semthethweni kuphela ngo-2010. Ngo-2013, Daniil Belyh, ukuphila siqu okuyinto futhi waqala ukwakha, washada no-Anne - isisebenzi ekuphathweni kamongameli.
I hero lesi sihloko lithi neze wayebakhathalela indlela ayebukeka ngayo, nokuthi niyogqokani, uma kuthi enye noma enye into, ukuthi izinto ahlelwe futhi ifenisha efulethini. Uma sikhuluma izingubo, khona-ke ukucasha isitayela eyinqaba, futhi ngenxa yokuthi abantu emigwaqweni ukwazi Daniel akuyona ngaso sonke isikhathi.
Kulesi ukuphila, Daniel - a owenza langempela. Engingakusho nje uqaphele lapho uhlezi. Futhi kwenzeka hhayi eGibithe, Turkey noma Tunisia. Honeymoon, isibonelo, wachitha esiqhingini esincane eduze Phuket, lapho nomkakhe cishe akhukhulekele-tsunami zasolwandle ofakazi banayo.
Futhi ngandlela-thile, uDaniyeli waya Cuba. Njengoba umhumushi, wathatha ibonwa owesifazane othile waya ukuya emizaneni yakuleyo ndawo ukubona Cuba okungalungile, olubonakaliswa ku nesembozo omagazini ecwebezelayo futhi lokhu, njengoba besho, kusuka ngaphakathi. Yena bazulazula kulezi amadolobha izinsuku ezine, igeziwe kuphela olwandle, hhayi aphuce. Futhi ngenkathi yonke into emuva eMoscow nge eziyizikhumbuzo, utshwala nogwayi, iqhawe lethu ibithwele naye kwagxila kuwena.
Futhi emva Daniel ukudlalwa movie mayelana Makhno, waya India izinyanga eziyisithupha. iqhawe lethu kwakukhona uhlanzekile Ayurvedic lanqoba iphakama eziningana nxazonke Everest.
Ngisho Daniel nje uthanda itiye eliluhlaza, kodwa ungalokothi yenza ngayo amanzi empompini, futhi kuletha imithombo yayo ekhethekile neziphethu. Yena brews itiye yibo bonke imithetho kanye esitsheni akhethekile. Ngezinye izikhathi ngisho zabo ukubuthwa amakhambi itiye, kulandele ngohambo e Buryatia futhi iBaikal.
Noma kunjalo, konke ukuzidela Daniel nokuzilibazisa musa kumvimbe ukusebenza. Ngakho, ngo-2013 ezikrinini out mafilimu nge iqhaza lakhe ngokuthi "Umama oyomelana", "Vangelia", "Ubuhlobo Ezinkulu". Futhi okwamanje, ngo-2014, ziyojabula izethameli izithombe "Umshado nemidanso" futhi "Umkhulu Young", lapho iqhawe esihlokweni sethu nje esingenakuphikiswa.
Alfonso Cuarón (Alfonso Cuarón): Umlando kanye nomsebenzi wakhe njengomqondisi
Pol Uinfild - American umlingisi generalist
Umlingisikazi Anna Nahapetova: Biography, ukuphila siqu. movie aphezulu
Yini ama-movie ezithakazelisayo mayelana losers kuwufanele bebona?
Patrick Stewart: umuntu unekhono kuyinto unekhono konke
Sociopath - ubani lo? Izimpawu ngalesi sifo, izimbangela kanye nokwelashwa
Indlela ubhake kuhovini Shank: iresiphi